Ibhetri yeHoppt, iPaki yeBattery yeLithium ion yesiNtu, eTshayina 18650 umenzi webhetri
Ugcino lwamandla Ibhetri yeLithium
Ikhaya loGcino lwaMandla eLithium Ibhetri
Isikhululo saMandla esiphathwayo
Ibhetri yebhayisekile yoMbane yeLithium
Ibhetri yeLithium eguquguqukayo
Ibhetri yeLithium yeUPS
Ibhetri yeLithium eneVoltage ephezulu
Ibhetri yeLithium ekhethekileyo
Ubushushu obuphantsi bebhetri yeLithium
Ibhetri yeLithium engaqhumi
Ubushushu obuphezulu bebhetri yeLithium
Ibhetri yeLithium ephezulu
Ibhetri yeLithium yoShishino
Ibhetri yamandla eLithium
Ibhetri yeLithium Polymer egobileyo
UkuTshaja ngokukhawuleza ibhetri yePolymer Lithium
Ibhetri yePolymer Lithium Ultra-ebhityileyo
UkuGcinwa kwamandla Ibhetri yeLithium
Ibhetri yeLithium yeIron phosphate
Iwaranti yeminyaka elishumi
AMANDLA APHATHWAYO HLUKA
Ujongano lwemveliso ezininzi
Ukuxhasa ukutshaja kwelanga
Ukhuselekileyo kwaye unokwethenjelwa
Ukugcinwa kwamandla eKhaya Ibhetri yeLithium
Ugcino lwaMandla eKhaya
Ixesha lewaranti elide
Ibhetri yeLithium Iron Phosphate
Ifanelekile Kwimekobume yoBubushushu obuntsonkothileyo
I-BICYCLE YOMbane BATTERY
Ikhuselekile kwaye ithembekile-
Iibhetri ezikumgangatho ophezulu
I-LITHIUM POLYMER BATTERY
Umzi-mveliso weminyaka eyi-17
Iqela lobunjineli obuchwephesha
10,000 Ukugoba iimvavanyo
Isebenza kwiZixhobo eziNgqwethiweyo eziSmart
IZISEKO EZINE ZEMVELISO, IZIKO ELINYE R&D
NGAPHEZU KWE-3,600 IZISOMBULULO ZAMANDLA WEBHETRI LITHIUM
100 AMAGCISA OBUCHWEPHESHE
Ipakethi yebhetri yeLithium
Ibhetri yoGcino lwaMandla eKhaya
HB 36V 10Ah Ibhetri yeLithium yoMbane yeBhayisekile yeLithium
HB 36V 12Ah Ibhetri yeLithium yoMbane yeBhayisekile yeLithium
HB 48V 10Ah Ibhetri yeLithium yoMbane yeBhayisekile yeLithium
HB 48V 12Ah Ibhetri yeLithium yoMbane yeBhayisekile yeLithium
12v Ibhetri yeLithium
24v Ibhetri yeLithium
36v Ibhetri yeLithium
48v Ibhetri yeLithium
Ibhetri yeLithium eguquguqukayo yePolymer
Lungiselela IiMveliso ozifunayo
Ngokweemfuno ozingenisileyo, iimeko zesicelo, kunye neemveliso, iqela lethu lobuchwephesha beenjineli libonelela ngesisombululo samandla esilungiselelwe wena.
Izibonelelo zokukhetha thina
Ngokweemfuno zabathengi kunye neemeko zesicelo, iinjineli zobuchwephesha zibonelela ngezisombululo ezithembekileyo.
Sisebenzisa iibhetri zethu ezigqithise imigangatho eyahlukeneyo yamazwe ngamazwe ukuthembeka kweebhetri.
Iminyaka eyi-16 yokugxila, kuphela ukwaneliseka kwabathengi, ukubonelela ngesiqinisekiso sobomi bebhetri yemveliso kwiinkalo ezahlukeneyo.
Siye sasebenzisana noHoppt ukususela ngo-2017, kwaye iimveliso zabo ezikumgangatho ophezulu zandenza ndaziva ndonwabile. Zombini iinkonzo zabathengi kunye nenkonzo yemveliso zibonisa ngokugqibeleleyo into ebizwa ngokuba yisantya saseTshayina.
Ukugcinwa kwamandla eKhaya
Ukugcinwa kwamandla asasaziweyo
LiFePO4 Ibhetri Pack
Ibhetri yemoto yeGalufa
Dongguan Hoppt Light Technology Co.,Ltd.(Hoppt Battery for short) yaseka Huizhou Hoppt Battery ngo 2005 kwaye yafuduka ikomkhulu layo ukuya Yongjiasheng Industrial Park, Nancheng District, Dongguan ngo May 2017. Inkampani yasekwa ngumsebenzi ophezulu oye wabandakanyeka kuphando lophando. kunye nophuhliso loshishino lwebhetri ye-lithium iminyaka eyi-16.lt luphando kunye nophuhliso, ukuveliswa kunye nokuthengiswa kweebhetri ze-3C zedijithali ze-lithium, iibhetri ze-lithium ze-ultra-thin, iibhetri ezikhethekileyo ze-lithium, iibhetri ezikhethekileyo kunye nobushushu obuphantsi kunye neemodeli zebhetri zamandla. Iqela kunye namanye amashishini akhethekileyo. Kukho iziseko zokuvelisa ibhetri ye-lithium e-Dongguan, eHuizhou naseJiangsu.
Ngokweemfuno zabathengi kunye neemeko zokusetyenziswa kwabathengi, iqela lethu lobuchwephesha beenjineli libonelela ngezisombululo ezithembekileyo zebhetri kwiimveliso zabathengi.
Sisebenzisa iibhetri zethu kwaye siphumelele imigangatho eyahlukeneyo yamazwe ngamazwe yokuthembeka kweebhetri.
Ukusebenza okuzinzileyo, ukubonelela ngenkxaso yokusebenza ethembekileyo kwiimveliso zabathengi
Funda okungakumbi malunga Bukela iVidiyo
38R&D abasebenzi, 25 umgangatho-per-sonnel
Ukuzikisa ukucinga kusenza sibe nobuchule ngakumbi.
I-95% yabathengi bayancoma.
Amabali ethu empumelelo
ILithium yeBattery yoKhuseleko lwePaneli yeWiring Indlela
ishedyuli yeprojekthi: 2021-09-11
Ingaba i-Super-Capacitor ingahlawulisa ixesha elingakanani? Ihlawulisa Njani I-Super-Capacitor?
Ulwazi & Iindaba
Ibhetri ye-Lithium yakudala imibuzo eyi-100, kuyacetyiswa ukuba uqokelele!
Ngenkxaso yemigaqo-nkqubo, imfuno yeebhetri ze-lithium iya kwanda. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha kunye noqoqosho olutsha ...
Kutheni ibhetri ye-lithium iron phosphate isilela?
Ukuqonda unobangela okanye indlela yokusilela kweebhetri ze-lithium iron phosphate kubaluleke kakhulu ekuphuculeni ukusebenza kwebhetri kunye ...
Ubusika buyeza, jonga i-low-temperature analysis phenomenon yeebhetri ze-lithium-ion
Ukusebenza kweebhetri ze-lithium-ion kuchaphazeleka kakhulu kwiimpawu zabo zekinetic. Kuba iLi + idinga ukuphanziswa kuqala xa ...
Ukuphuhliswa kweebhetri ze-lithium
Imvelaphi yesixhobo sebhetri inokuqala ngokufunyanwa kwebhotile yeLeiden. Ibhotile yeLeiden yayiyeyokuqala ...
Izazinzulu zaseMelika zenze uhlobo olutsha lwebhetri yetyuwa etyhidiweyo, ekulindeleke ukuba ifezekise ukugcinwa kwamandla egridi kwiqondo lokushisa eliphantsi kunye nexabiso eliphantsi.
Ngokunyuka okuqhubekayo kwemithombo yamandla avuselelekayo njengomoya kunye namandla elanga, izisombululo zokudala ziyafuneka ukugcina ...
Ingxoxo 26650 Ibhetri Vs 18650 Ibhetri
Ukuba unomdla wokwazi malunga nomahluko ophambili phakathi kwebhetri ye-18650 kunye nebhetri ye-26650, ke ufikile ...
Ngaba Uyayibuyisela ibhetri yeLithium Ion kwiFreezer?
Iibhetri zeLithium ion, ezikwabizwa ngokuba ziibhetri ze-li ion zizixhobo zokugcina amandla ombane ixesha elide ...
Iinjineli ziye zenza isahluli esizinzisa i-electrolyte yegesi ukwenza iibhetri eziphantsi kobushushu obuphantsi kakhulu zikhuseleke ngakumbi.
Ngokweengxelo zemithombo yeendaba zangaphandle, iinjineli ze-nano kwiYunivesithi yaseCalifornia San Diego ziye zaphuhlisa isahlukanisi sebhetri ...
I-ESM: Ujongano olwakhelwe ngaphakathi lwe-ultra-conformal ye-electrolyte ene-perfluorinated ukwenzela ibhetri ye-lithium ephezulu yamandla
Imvelaphi yoPhando Kwiibhetri ze-lithium-ion, ukufezekisa injongo ye-350 Wh Kg-1, izinto ze-cathode zisebenzisa i-nickel-rich layered oxide ...
Yintoni omawuyenze ngebhetri yeLithium Ion ePunctured
Ibhetri ye-lithium ion ephuhliweyo iya kuba yingozi. Nje ukuba igqojozwe, yonke i-electrolyte ekhoyo kuyo yoma e ...
Indlela yokuphatha yeNkunkuma yebhetri yeLithium ion
Kukho isixa esikhulu esingahlaziywanga ngexabiso eliphezulu lezoqoqosho, njenge-cobalt, i-lithium, i-nickel, ubhedu, i-aluminium, njl.
Umzi-mveliso wam uvelisa iimagnethi. Isebenzisa umbane omninzi ngexesha lenkqubo yokuvelisa. Ke ngoko, ndifuna ukufumana iibhetri eziphuma-kwincopho yomzi-mveliso wam. Ndifumene lo mvelisi ovela eTshayina. Le yiprojekthi yokugcina amandla e-2MW. Enkosi, Yenziwe eTshayina!
Ndingumboneleli wenkonzo yelanga walapha. Xa ndandinexhala ngebhetri yam, umntu endisebenza naye wacebisa le nkampani. Unxibelelwano lwalumnandi. Inkonzo yabo kunye nobungcali babo bugqwesileyo. Ibhetri enikezelweyo nayo ilungile, ngoko ke ndiphumelele ngempumelelo le projekthi; enkosi.
Isakhiwo 1, No.8, Shigu Garden Road, Nancheng Street, Dongguan City, Guangdong Province
Fumana iisampulu zasimahla okanye izaphulelo!
Amalungelo okushicilela ©2005-2022 Dongguan Hoppt Light Technology Co.,Ltd.
Bhala umbuzo apha
phendula kwiiyure ezi-6, nayiphi na imibuzo yamkelekile!